China Posture agbazi ubu lumbar ihe nkwado ndabere na ihe nrụpụta | AoFeiTe
Ihe:Polyester, Polyester, Elastic Straps
Okike:Universal, Mgbanwe Ndozi
Ihe nlele:Enwere, Enyemaka Mgbu Mgbu
Ọrụ:Ọrụ Magnetik Na Ọkpụkpụ
Advantage:High na-agbanwe, tightness Kemeghi, Easy eyi
Product aha:Idozi Ntughari Ubu Lumbar Lower Back Brac
Nkwakọ ngwaahịa:1 mpempe / akpa rọba
Ọrụ nke Ngosi Corrector / eriri mgbu azụ 1. na-enyere aka belata ihe mgbu ma dozie ọnọdụ dara ogbenye. Mgbe ị na-eyi nkwado ọ ga-eji nwayọ weghachite ubu, olu na isi na-agbazi mgbe ị na-akwado ọkpụkpụ azụ. 2.Enye ọgwụgwọ, ọgwụgwọ, ọgwụ mgbu na-enweghị ọgwụ mgbu maka mgbu azụ. 3.Support straps gburugburu n'ihu ubu sere ha ji nwayọọ laghachi azụ maka ezi postcho. Mee ka ị dị ogologo ma kwụ ọtọ. 4. Mgbochi aka nke mmebi iwu nke afọ iri na ụma, ịda mba na ịmị ọkụ 5.na-enyere ndị agadi aka imeziwanye usoro ịkpụkpụ azụ 6.Help ị na-eguzo ogologo na straighter
Anyị bụ ndị ọkachamara na nlekọta ahụike na orthopedic ngwaahịa dị ka Ikpere emem nkwado Nkwado, n'úkwù Back nkwado nkwado, Posture Corrector, Mkpụrụ Nkwado Nkwado, Ikiaka nkwado Nkwado, Mgbehu emem nkwado Nkwado, Jirinụ Aka Nkwado, Olu Nkwado Nkwadowere gabazie. Ọzọkwa otu ọrụ ọrụ anyị bụ Nhazi CUSTOMIZE. Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa na njirimara imewe gị na igbe agba. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ ogologo oge!
Nkọwa: Ngwaahịa: Idozi imezi ubu lumbar ihe: eriri elstic, spandex, nko na akaghị, polyester Ọrụ: Ziri Ezi Ighachite azụ, nye ubu azu nkwado agba: nwa nha: SML XL XXL Igbe: 65-75 (cm) 76-80 (cm) 81-85 (cm) 86-95 (cm) 96-105 (cm) Factory: East na southwest n'akụkụ nke anọ nke ụlọ na NO.202 nke Greek na-akwado okwu: ulo oru ogige, No.389 nke Hengshan n'okporo ámá, High-tech Mpaghara, Shijiazhuang Logo: Nke anyi ma obu nke gi akwụkwọ ikike: ọnwa 12 Okwu ahia: ugwo: Usoro nlele ma ọ bụ usoro nnwale - ịkwụ ụgwọ site na 100% TT Otutu iji - ugwo site na 30% TT tupu oge eruo, a gha agha ugwo tupu nnyefe. nnyefe: Samkpụrụ nlele- n'ime awa 48 nnukwu iji- dika nke ukwu (Ọ bụrụ na ọnụọgụ ahụ abụghị karịa 2000 iberibe, anyị nnyefe oge ga-gburugburu 7 ụbọchị)
Na-achọ ezigbo Ngwunye Nkwado LumbarEmeputa & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All Lower Back Brace na-ekwe nkwa dị mma. Anyị bụ ndị China si Factory nke Posture Corrective Jirinụ emem nkwado. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Clavicle Belt Sport Back Nkwado ndozi ndozi
Inogide Kemeghi Comfortable Back Brace Postu ...
Hmụaka Humpback Postre Corrector
Kwado akwa eriri akwa tebụl azụ mgbu
Clavicle postcho corrector azụ nkwado adjusta ...